Torohevitra manokana hanombohana sehatra famoronana | Famoronana an-tserasera
Raha anisan'io vondron'olona te-hanomboka io ianao dingana famolavolana, ity lahatsoratra ity dia ho tena lavorary ary ilaina ny fananana olona iray izay mahalala ny zavatra Ny maha-izy ny maso, iza no mahay manova horonan-tsary, manao tranokala, fampiharana ary famantarana.
Ny marina dia hoe mitaky mpiasa ny mpitantana fa vitany ny manao izay rehetra hain'ny olona tena zatra atao na hoe misy olona tsy mpanampy intsony manoa an'io.
Ny karama dia ho fanamby lehibe ho an'ny mpanampy foana rehefa tena te ho anisan'ity asa ity izy. Mazava ho azy koa ity mazàna miovaova arakaraka ny asa Na misafidy ilay olona na voakarama, na izany aza, dia tsy maintsy tsaroana hatrany fa amin'ny tsirairay amin'ireo fotoana ireo dia zavatra vaovao maro no azo ianarana.
Mety hitranga izany amin'ny fotoana maro mandefasa portfolio, satria amin'ny ankabeazan'ny tranga dia ny portfolio-n'ny mpianatra dia ny andiana tutorial maro nalaina tao amin'ny tranonkala Photoshop, sary an-tsary sy sary fanarenana sary an'ny fianakaviana taloha.
Ny tolo-kevitra iray dia ny fahafahantsika manao mitadiava fomba hafa izany dia afaka mampiseho fomba fijery ny zavatra iray izay tiantsika, toy ny hoe raha tianao mozika, manandrama mitady zavatra izay mampiseho ny fitiavanao an'ity lohahevitra ity ary izany ve ny maro amin'ireo hetahetan'ny mpianatra rehefa vita ny fianarany oniversite, izany ve te-hiasa amin'ny fikambanana lehibe toy ny Google na Facebook, izay mazava ho azy fa mety ho tsara na ratsy.
Raha efa nahita ny sehatra famolavolana izay nirinao mafyMila manao ny tsara indrindra vitanao ianao mba hahatonga izany fotoana manokana ho traikefa tena tsara.
Amin'izao fotoana izao dia tsy maintsy mametraka fanontaniana mahaliana sy / na mahaliana foana ianao, izany hoe iray amin'ireo Ireo dingana eo amin'ny fiainana izay manomboka mahatsikaritra tsikelikely ny fiasan'ny faritra iasan'ny olona.
Ary ny fahafahana manontany fotsiny momba ny toe-javatra rehetra na mikasika ny vahaolana na inona na inona dia tena manampy tokoa raha izany no tena tadiavintsika, inona no safidy hafa azontsika katsahina any aoriana any amin'ny fotoana hafa ary manan-danja indrindra amin'ny rehetra, dia andeha hojerentsika raha tena isika mahita anao manao an'io karazana asa io ho avy ela.
Ho famaranana dia afaka milaza isika fa ilaina izany manana fahalalana sy fahaiza-manao rindrambaiko, saingy tsy dia ilaina loatra ny fananana ny fahalalana rehetra, miaraka amina zavatra tsotra fotsiny dia mety ho ampy hanombohana an'ity sehatry ny famolavolana ity eo amin'ny sehatry ny asa ary tsy maninona na manomboka amin'ny orinasa lehibe na kely, satria hahazo traikefa foana isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Graphic Design » Torohevitra manokana hanombohana dingana famolavolana